बाबुरामलार्इ पार्टी एकतामा आउन अध्यक्ष दाहालको आग्रह
चैत ०१, २०७४ BNNTV
काठमाडौँ, १ चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी आन्दोलनको मूल प्रवाहबाट बाहिरिएका सबै शक्ति र समूहलाई एकतामा आउन पुनः आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत दिएकाले जनअ‍ेपक्षाअनुसार सरकारले काम गर्ने विश्वास पनि उहाँले दिलाउनुभयो । कार्यक्रममा नयाँ शक्ति नेपाल गोरखाका जिल्लास्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । नवप्रवेशीलाई अध्यक्ष दाहालले पार्टी प्रवेश गराउनुभएको थियो ।
प्रकाशित : बिहिबार, चैत ०१, २०७४१६:२६
सिरियाली गृहयुद्ध आठौँ वर्षमा, तीन लाख ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु, २ करोड विस्थापित
प्रसिद्ध बनदेवी मन्दिरमा जोगीले गरे जोगीकै हत्या: यस्तो छ कारण
बजार मूल्य रु २१ लाख ९४ हजार ५७ बारबारको सुनसहित आलम पक्राउ !
बुबाआमा गुमाएका टुहुरा सात बालबालिकालाई सहयोग जुट्दै !
प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा किन बाेलाए मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक
प्रेस स्वतन्त्रता हनन्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार !